RUGTA DUUBISTA "BERENDEY": SHARAXAADDA, NAQSHADEYNTA, SIFOOYINKA, WAX SOO SAARKA - BEEKEEPING
Beekeeping weli wali ma istaagin, marmarna waxay soo bandhigaysaa qaar ka mid ah horumarka cusub ee u oggolaanaya in beesku abuuro xaalado badan oo raaxo leh ee shaqada iyo horumarka, iyo milkiilaha aabaha, isla mar ahaantana, fududeeyee oo yareeya shaqooyinka maalinlaha ah. Mid ka mid ah horumarinta xiisaha leh waa habeynta taakuleynta ee shinnida nooca Berendey. Haddii aad xiiseyneyso waxa ay tahay iyo sida loola shaqeynayo gacmahaaga, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad aqriso maqaalkayaga.
Xarigga musqusha waa unug yar oo mobile ah oo leh 10-40 qaybood oo loo qaybiyay qaybaha plywood-ka ee qoysaska shinni ku nool yihiin. Qaybtani waxaa si sahlan loo qaadi karaa, keenaya dhirta malabaha. Waxay yeelan kartaa cabbirro iyo naqshado kala duwan. Qaab-dhismeedka gudaha waxaa lagu barbardhigi karaa sharraxeeye, halkaas oo ay ka jirto rug gaar ah oo ka mid ah "sawir qaadaha".
Inta ugu badan oo dhan, haddii taayiradu ay ku qalabantey taayirro, taas oo u sahlaysa apiary in ay u gudbiso ilaha laaluushka si loo kordhiyo mugga malabku soo saaray.
Ma taqaanaa? Hal qaado oo malab ah, 200 shinni ayaa loo baahan doonaa inay shaqeeyaan maalinta oo dhan. Mid ka mid ah cayayaanka ayaa keenaya hal kiilo oo malab ah ka dib wareega siddeed milyan oo ubax. Inta lagu jiro maalintaas waxay awood u leedahay inay duuliso toddoba kun oo dhir.
Beekeepers waxay isticmaalaan siyaabo kala duwan oo loo isticmaalo qalabka duubista: sida qalabka degdegga ah iyo sida mobile.
Gawaarida waxaa la sameeyaa ama la iibsadaa dhowr ujeedo:
Hagaajinta meelaha bannaan ee apiary (waxaad isbarbar dhigi kartaa inta baddan ee goobta, tusaale ahaan, waxay qaadan doontaa 10 xayawaan ama hal shinni);
kordhinta xaddiga malab la soo ururiyey xilli kasta;
u isticmal ma aha oo keliya in la goosto malab, laakiin sidoo kale sida pollinator, apiary qayb ururinta ee malab, jelly boqortooyada, abuurayo gooyn.
Waxaa jira kala duwanaansho kala duwan oo ah qaabeynta rugaha shinnida.
Dhismaha Berendei waxa ay heleen jawaab celin wanaagsan. Waxaa loo tixgeliyaa sida ugu waxtarka badan, ee ku habboon iyo rajo-gelinta.
Waxaad sidoo kale xiiseyneysaa inaad barato sidii loo abuuri lahaa beehive, iyo sidoo kale ku saabsan faafinta Abbot Warre, Dadan, Alpine, nucleus, dad badan.
Maanta taakulaynta "Berendey" waa la iibsan karaa, sidoo kale waxaa gacanta laga soo saari karaa, iyada oo leh xirfado farshaxan oo kaliya ah iyo qalab yar.
Qiimaha hal taako ee 48 qoys waa qiyaastii 3-4,5 kun oo doolar oo loo isticmaalay iyo ilaa 9 kun oo doolar oo loogu talagalay naqshad cusub.
Ma taqaanaa? Qadarka rikoodhka ah ee malab ee hal gumeysi shinni ah oo maareynaya xilliga xagaaga waa 420 kg.
Dabcan, sheyga Berendei-gacmeedku wuxuu ka samaysan yahay gacmihiisu waxay noqon doonaan kuwo ka raqiisan - ugu yaraan 40%.
Masalan "Berendey" samee naftaada
Ma fududa in la sameeyo qalab. Dabcan, waa inaad tinker gaabisaa. Waa inay ku bilaabataa horumarinta sawirka. Haysashada sawir dhamaystiran oo gacanta ah, waxaa suurtogal ah in ay si cad u qeexaan qalabka loo baahan yahay iyo sida qaabku u egyahay qaabka loo dhammeeyey.
Sawirka waa in la soo bandhigaa:
Dhammaan cabbiraha pavilion;
nidaamka meelaynta, xajmiga dhismaha shaqada iyo guriga;
qalabka kululaynta gudaha;
qalabka nalka gudaha;
helitaanka qaybta kaydinta agabka iyo dharka.
Sida cabbirka, waa in beekeeper waa inuu galo koritaanka buuxda, ma aha inuu ku nasto madaxiisa on saqafka. Mawqifka ayaa la doorbidayaa ballacan ugu yaraan 0.8 m.
Waa muhiim! Tirada qaybaha waa la go'aamiyaa iyadoo ku xiran cabbirka taakulaynta. Sida caadiga ah, haddii la sameeyo gacanta, markaa waa in la helo in ka badan labaatan ka mid ah. Haddii kale, qoysaska ayaa isku dari doona.
Dharka dhererka wuxuu u dhigmaa tirada rugta iyo meesha ay joogaan.
Si aad u heshid rugta cajiibka ah, waa inaad leedahay ugu yaraan xirfado yar oo ku shaqeynaya qoryaha, birta, iyo qalabka soo socda:
Laga soo bilaabo qalabka waxaad u baahan doontaa:
kuraasta qoryaha iyo baararka (ama tuubooyinka birta);
bac ah xumbo;
Guddi faleebo leh;
xayiray ama kuxiray aluminium;
xadhig bir ah ama kartoon (cabbirka unug 2.5-3 mm);
daboolanaanta ama filimka.
In soo saaridda design naqshadeynta waxay sidoo kale u baahan doontaa:
Trailer (waa weyn ee baabuurta ZIL iyo IF);
Gawaarida "Berendey" waxay sameeyaan saddex nooc: 16, 32 iyo 48 qoys.
Nidaamka sameynta aaladda waxaa loo qaybin karaa saddex marxaladood:
soo saarida cajalado.
Dhismuhu wuxuu ka samaysan yahay qoryo alwaax ah (ulo bir ah), taas oo marka dambe lagu dhejin doono kuraas, ama sanduuqyo bir ah. Marka kuraasta xaashida waa inay iska ilaaliyaan samaynta dildilaaca.
Si dardar leh, sare ee guddiyada waxay u baahan yihiin in lagu daboolo jilbaha iyo duufaan dareemay. Derbiyada iyo dabaqadu waa in la sameeyaa layskiyo badan oo leh isticmaalka qasabka ah ee rinjiga oo aan u oggolaan doonin in carwadu ay ku qaboojiso inta badan jiilaalka iyo inay kululaadaan xagaaga. Xuddunta gudaha waxaa laga sameyn doonaa 3 mile oo adag.
Saqafku wuxuu ka samaysan yahay alaab qarxa ama qalab bir ah. Waxay noqon kartaa isku laabasho. Waxay u baahan doontaa inay sameeyaan dabo ama daaqado loogu talagalay galitaanka qoraxda. Sidoo kale, waxay u baahan doontaa in la daboolo buuqa dibedda. Ujeedadaas awgeed, xumbada ugu fiican, oo la dhigo saqafka hoostiisa.
Xaaladdu waa lagama maarmaan in la fekero oo ka dhigo laba albaab oo albaab ah (mid ah - goobta shaqada, midka kale - qolka dambe), iyo sidoo kale godka tuubada. Haddii rugta ay ku taal meel sare (tusaale ahaan, gawaarida, rikoodhada telescopic), ka dibna waxay u baahan doontaa in lagu qalabeeyo jaranjaro birta ah oo aad ku fuuli karto oo aad geli karto dukaanka.
Dhismaha qeyb kasta wuxuu ka samaysan yahay dhowr lakab, oo leh xumbo, taas oo la dhigo inta u dhaxeysa taangiga. Hal qayb ayaa waxaa jiri doona siddeed risaaq oo leh qaybo gudaha ah. Qof kasta oo soo kacaya waxaa loogu talagalay sagaal koob oo loogu talagalay laba qoys.
Dhimayaasha ayaa ku qalabaysan albaab kaliya oo bixiya laba cajalado. Sidaa darteed, waa inay jiraan shan albaab.
Waa inay xiran yihiin qabatooyinka dildilaaca oo laga sameeyo walxo hufan (Plexiglas, filim qaro weyn) si aad u kormeertid xaaladda xaalada qoyska iyada oo aan dhibin. Sidoo kale iyaga waxaa lagama maarmaan ah inay sameeyaan afarta hawo ee hawada ah, kuwaas oo lagu daboolay shabaq. Qufacu waxay ku yaalliin meel kasta oo albaab ah, isla mar ahaantaana iyaga oo maraya hawo wareegaya.
Qaybta hoose ee saldhig kasta waa in lagu qalabeeyaa daboolka manka iyo mesh antivarotomy.
Marka heerka saxaaxa sagaalaad, laba xabbadood ayaa la diyaarin karaa.
Risers waa la rinjiyeeyay midabyo kala duwan si qoysasku iskula qasmaan.
Waxaad sidoo kale xiiseyneysaa inaad wax ka barato noocyada noocyada ah ee malabka sida haweenka, sainfoin, phacelia, bocorka, lime, qajaarka, acacia, rapeseed, løndelion, lafdhabar, jimicsi.
Ka dib dhismaha qaabka iyo qaybaha ayaa sii wadi kara diyaarinta cajalado. Cassettes waa sanduuqyo, cabbirada taas oo lagu go'aamin karo beekeeper naftiisa. Tusaale ahaan, fiidiyaha waxaan soo jeedineynaa sanduuq 29.5 cm, 46 cm dheer iyo 36 cm ballaaran.
Duubyada waa in laga sameeyaa alaab xoog leh oo joogto ah - alwaax, foorno, taangiga ayaa sameyn doona.
Qaybta hore ee cajalad kasta waa inay ku taallaa godka tuubada. Tirada muraayadaha ku yaala cajaladaha waxaa loo go'aamiyaa qaab kasta oo shakhsiyan ah.
Farqiga u dhexeeya cajaladaha waa inay ahaadaan 1.5 cm.
Cassettes waxaa lagu rakibay midabtakoorka ama xayndaabyada.
Masraxa waa inuu lahaadaa miiska taagan ama miiska looxiyo ee loogu talagalay cajalado laga soo qaaday.
Ma taqaanaa? Bees waxay leeyihiin qabteyaal qurxoon oo fiican - waxay urin karaan malab ilaa hal kilomitir.
Haysashada shinni ee suunka musqusha ayaa leh faa'iidooyin iyo faa'iido daro. Ka mid ah faa'iidooyinka mudnaanta leh:
socodka iyo suurtogalnimada gaadiidka u dhow dhirta malab;
awooda lagu shaqeeyo beeska cimilada;
fududayn iyo fududeyn ujeeddooyinka iyo ka shaqaynta;
Farshaxanka - suurtagalnimada in loo isticmaalo sidii loo isticmaalo malax samaynta midab-beelka iyo midab takhasus u leh ururinta jelly boqornimada iyo soo saarista gooynta;
kordhinta qadarka malab iyo malabyada la ururiyey;
awooda lagu hayo heerkulka habboon iyo baahida loo qabo xayiraadda;
fududeynta nidaamka quudinta;
fududeeyee hanaanka dhismaha qoysaska;
Fududeynta qaadista cudurrada;
xoojinta dhaqdhaqaaqyada qoysaska dhismaha.
Ka mid ah xaasaska, waxaanu xusuusinaynaa:
Dhawaan dhowaanshaha qoysasku waxay keenayaan inay wareeraan oo ay keenaan dhibaatooyin qaar ka mid ah content ee cayayaanka;
Amni-darrada dabka - sida caadiga ah, xashiishada ayaa lagu sameeyaa qalab aad u ololi kara.
Waa muhiim! Marka aad xirayso nalalka, waxaa muhiim ah in la doorto qalabka nalalka iyadoo la tixgelinayo amaanka dabka.
Si looga fogaado dhibaatada marka la isticmaalayo qalabka musqusha, waxaa lagama maarmaan ah in looga fikiro qorshahiisa marxaladda dhismaha.
Qalabka shinni ee Beenday waa nashqad aad u fiican oo kuu ogolaanaya inaad ku guulaysato shinnida meelo yaryar iyo qiyaasta warshadaha.
Haysashada shinni ee xaaladaha noocaas ah waxay leedahay faa'iidooyin badan oo si fudud u fududaynaya shaqada ee beekeeper. Markaad sameysid xarun adag oo gacmohooda ah, milkiiluhu wuxuu ka fekeraa faahfaahin kasta oo uu abuuraa qaabka ugu habboon shaqada uu la shaqeeyo beesku.
Sida laga soo xigtay beeraleyda qibrada leh, Berendey si sax ah loo sameeyey ayaa kor u qaadeysa waxtarka udubdhexaadka ah 30-70%. Dhismaheeda, dhammaan qalabka iyo qalabka, iyo sidoo kale shaqaale dheeraad ah, waxay qaadataa laba maalmood.